Maitiro ekupemberera Zuva reBhuku kumba. Mazano akanakisa! | Zvazvino Zvinyorwa
Maitiro ekupemberera Zuva reBhuku kumba
Encarni Arcoya | | Zviitiko
Zuva rebhuku iri nderimwe remakanyanya kukosheswa nevanyori nevaverengi. Kubvumbi 23, iro zuva rakagadzwa zvinoenderana nenhoroondo yezuva rebhuku, rave kusvika. Uye kunyangwe gore rino risingakwanise kupembererwa kure nekumba, hazvireve kuti hapana hurongwa hunogona kuitwa.
Muchokwadi, taifunga kuti tichakupai imwe pfungwa dzekupemberera zuva rebhuku kumba. Zvimwe zvacho zvine chokwadi chekuitwa.
1 Zuva reBhuku pamba: 7 + 1 mazano ekushandisa zvakafanana kana zvirinani pane mumugwagwa
1.1 Gadzira mabhukumaki (iwo mabhukumaki)
1.2 Verengazve mabhuku awakada
1.3 Tenga ebook
1.4 Gadzira nyaya
1.5 Kutaura nyaya kana kuverenga zvinonzwika
1.6 Dzosera network dzemasocial book zuva
1.7 Taura nemunyori
1.8 Shanyira raibhurari chaiyo
Zuva reBhuku pamba: 7 + 1 mazano ekushandisa zvakafanana kana zvirinani pane mumugwagwa
Pazuva rebhuku zvakajairika kuti vazhinji vauye kumabhaisikopo ebhuku akarongeka panguva ino kuzotenga bhuku, kutaura nevanyori kana kungoona nharaunda iyoyo
Asi, segore rino zvinhu zvese zvinofanirwa kunge zvichibva kumba, zvirongwa zvachinja. Uye isu tinoda kukufungira zvimwe zvepakutanga uye zvinoda kuziva kuti pamwe hazvina kuyambuka pfungwa dzako.
Gadzira mabhukumaki (iwo mabhukumaki)
Chimwe chezvinhu zvakajairika zvemuverengi ibhukumaki. Iyo zvakare inonzi bhuku poindi, ndizvo zvinoshandiswa kunongedzera kune iro peji rawanga uchiverenga.
Mumusika mune akawanda marudzi emabookmark aunogona kutenga, asi sezvo isu tiri kutaura nezvekusasiya imba, ko kana ukagadzira mabhukumaki? Kutenda kuYouTube, unogona kuwana makuru maitirwo ayo anokukurudzira kuti usunungure kufunga kwako.
Kwete izvozvo chete, unogona une muunganidzwa wakakura wemabhukumaki, imwe yega yega yemhando yekunyora: origami maitiro, nemitsara kubva mumabhuku, nemifananidzo ... chero chaungafunge nezvazvo.
Verengazve mabhuku awakada
Iwe unofanirwa kunge uine mamwe mabhuku kumba. Uye pane vese zvavo, unenge wakada zvimwe kupfuura vamwe. Zvakanaka, zano nderekuti, pazuva rebhuku, unogona kushandisa awa yenguva yako kuverenga zvakare bhuku iro raunofarira zvakanyanya.
La Kudzokororazve kunoshamisa nekuti iwe unoona zvinhu zvaimboenda zvisina kuzivikanwa. Kwete izvozvo chete, iwe zvakare unokwanisa kurangarira kunzwa kwawakasangana nako pawakatanga kuiverenga. Yakakwana, semuenzaniso, kana iwe uine bundu rekuverenga uye hapana bhuku rinoratidzika kunge rinokubata.
Uye zvimwe chete izvi zvinogona kuitika kune vanyori, avo dzimwe nguva vanoda kusanobatanidza uye kuverenga zvekare bhuku iro rakavawanira peni bug.
Zvakanaka, hatigone kubva pamba (kana isu hatifanire), uye kutenga bhuku kuti risvike musi wa23 rinogona kunetsa, uyezve unoisa panjodzi yekuisa hutano hwako (uye nevevanotakura vanofanirwa kutora newe) ku njodzi.
Saka, zvirinani tenga ebook. PaAmazon, kana pane mamwe mapuratifomu akaita saNubico, une sarudzo yekutenga mabhuku edhijitari ayo anotorwa pasi ipapo ipapo kubook rako muverengi saka unogona kutanga kuverenga izvo nekukurumidza sezvazvinogona.
Nekudaro, kunyange hazvo tsika ichiti tenga bhuku repepa pazuva rebhuku, regore rino uchaita chisaruro uye dijitari ichiri kunakidzwa
Imwe pfungwa yezuva rebhuku inogona kuve, yezuva, munyori wenyaya. Muchokwadi, kana iwe uine vana, iwe unenge wakazviita kanopfuura kamwe. Uye inogona kuve chiitiko icho munhu wese ari pamba anogona kuita.
Zvese zvaunoda kuti iwe utange kutaura nyaya. Pakupedzisira, munhu iyeye anopa nyaya kune mumwe munhu anofanirwa kuramba achitaura, achifunga zvese zvaitika. Uye zvichingodaro kusvikira zvapera.
Vadiki vanoda mutambo uyu, uye chiitiko chinokurudzira kugona, kunowedzera ndangariro uye zvakare kunonakidza. Ehezve, ini ndinokurudzira kuti iwe urekodhe nekuti gare gare anopfuura rimwe chete anosara aine chishuwo chekuteerera iyo nyaya zvakare.
Kutaura nyaya kana kuverenga zvinonzwika
Yakabatana neiri pamusoro, iwe une vanotaura nyaya. Asi pachinzvimbo chekuumba nyaya yacho, izvo zvauri kuzoita kuverenga iyo yakatove yakanyorwa. Uye zvakare, iri nzira yakakwana yekukurudzira vana kuverenga uye panguva imwechete ita kuti vakurumidze kuzviita.
Kana mhuri yese ikatora chikamu, havazozvione sechinhu chinofinha, asi sechiitiko chakajairika chinogona kunakidzwa zvakanyanya. Ehe, chenjera pakusarudza mabhuku sezvo achifanira kudiwa nemunhu wese mumhuri.
Imwe sarudzo kusarudza mabhuku akaumbwa nenyaya pfupi. Nenzira iyoyo munhu wese achaverenga kubva mubhuku raanoda nyaya pfupi. Kana iwe ukazvibatanidza nehurukuro pamusoro pekuti nei iro bhuku kana kuti chii chinopa kuverenga, unogona kuruma iyo bug kune imwe kuitira kuti ivo vakurudzirwe kuverenga.
Uye zvakare, izvi zvinogona zvakare kuitwa nekufona kwevhidhiyo, saka chingave chinoshamisa chiitiko chekutaura chekuita nemhuri, shamwari ...
Dzosera network dzemasocial book zuva
Masocial network akaita sehwindo rekunze izvozvi zvekuti unofanirwa kugara pamba. Saka wadii kupemberera zuva rebhuku kuburikidza navo?
Iwe unogona kufunga nezvezvinyorwa zvakanangidzirwa pazuva iro. Semuenzaniso: iwo mabhuku akakuratidzira iwe zvakanyanya, iwo aunofarira zvishoma, munyori waungade kusangana naye mumunhu, izvo zvishandiso zviri fetish yako kana zvasvika pakuverenga (kana kunyora) ...
Pane zvinhu zvakawanda kwazvo zvaunogona kutarisa pazuva rebhuku zvekuti iwe unongofanirwa kuronga kuti mangani mamaposi aunoda kuita zuva iro.
El zuva rebhuku rakaringana kutanga hurukuro ne munyori. Muchokwadi, iro zuva kumafaro mazhinji vanyori vane mukurumbira vane mitsetse mikuru kusaina mabhuku avo uye kupedza maminetsi mashoma nevanoverenga.
Asi iwe unoziva here kuti nekuda kwenzvimbo dzekudyidzana unogona kutaura nemunyori iyeye? Muchokwadi, vazhinji vari kugadzirira zviitiko zvepamhepo kuti vakwanise kuve pamwe nevaverengi vavo, saka iwe unofanirwa kungo sarudza waungade kutaura naye.
Zvinoenderana nemunyori anokupindura zuva iro kana kwete, asi zvirokwazvo anofara kugamuchira meseji. Sezvazvinozoita kuti ugamuchire zvakare.
Shanyira raibhurari chaiyo
Semuverengi, kuenda kuraibhurari kunogona kuva denga. Dambudziko nderekuti izvozvi zvakavharwa uye haugone kuenda kune imwe. Asi hongu zviripo.
Muchokwadi, pamwe raibhurari yeguta rako kana dhorobha rako haina zvakawanda zvekuita, asi zvakafanana hazvisi izvo kune vamwe vari munyika. Uye vakafunga kuti unovashanyira kubva kumba kwako.
Saka, pazuva rebhuku, unogona kushandisa zvishoma pane shanyira maraibhurari akanaka kwazvo pasi rese kuburikidza nekombuta. Nenzira, ronga rwendo rwako kuti kana izvi zvapera uye tora kushanyira maraibhurari kuti uvaone semunhu gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zviitiko » Maitiro ekupemberera Zuva reBhuku kumba
Nhoroondo yeZuva reBhuku